सपना र पलाँसहरु « प्रशासन
सपना र पलाँसहरु
अनुहार प्रशन्न थियो । ओठमा मुस्कान र मनमा उकुसमुकुस पनि । सबै सपना आज पूरा भएका थिए । बैङ्क ब्यलेन्स पर्याप्त भएपछि अमेरिका छोडेका सुमन लामो समयसम्म बेखबर थिए । मोटो, खाइलाग्दो र गोरो वर्णले विदेशीकै छनक दिएको थियो । टम्म मिलेको शरीरमा लगाइएका कपडाले कामुकता झल्काइरहेका थिए । भरियाहरुले भारी विसाए । बाहिर थोत्रो कुर्सी थियो । त्यसैमा खुट्टा राखेर चौरतिर नजर लगाए । पाखो बारी बाँझो र खण्डहर थियो । बगैचाको नाम निशान थिएन । उनी जाने बेलामा ढकमक्क फूल फुलेका थिए ।
‘सरला ! ए… सरला । … बाबु ! बाबु युगल …. ।’ प्रतिउत्तर आएन । ढोका लगाइएको थियो । ताल्चा थिएन । ढोका उघारे । भित्र पसे । सामानहरु यत्रतत्र छरपस्टिएका थिए । आफूले छोडेका सामग्रीहरु कुनै थिए कुनै थिएनन् । भएका पनि थोत्रिएका थिए, थपिएका थिएनन् । घरभरि माकुराले जालो बुनेको थियो । भूँइभरि कसिंगर थियो । भित्तातिर फर्के । युगल, सरला र आफ्नो फोटो मुसुक्क हाँसिरहेको थियो । फोटो उठाए । छोरा र श्रीमतीको गाला मुसारे । माया भरिएर आयो ।
पाखो बारी बाँझो र खण्डहर थियो । बगैचाको नाम निशान थिएन ।
भान्सा कोठामा पसे । भाँडा धेरै जसो रित्ता थिए । थोत्रो ग्याँसले गिज्याइरहेको थियो । ग्याँसमाथि चिया पकाउने भाँडो कलेटी परेर घोप्टिएको थियो । यत्रतत्र जुठाभाँडा भेटिन्थे । उनलाई ग्लानी भयो । घरले उनको अनुपस्थिति प्रष्ट झल्काइरहेको थियो । आँफैलाई धिक्कारे ‘थुक्क म , कति स्वार्थी भएछु है ? दुःख पाएछन् क्यारे यिनीहरुले !’ तुरुन्तै सम्हालिए । ‘म आइहालें नि, अब सबै कुरा दुरुस्त बनाइहाल्छु ।’
छिमेकीहरु दिउँसै ढोका खुल्ला देखेर अचम्म परेका थिए । प्रायः बिहान र रातिमा मात्र खुल्ने घरमा आज अनौठो भएको थियो ।
सुमन खिस्स हाँस्दै बोले ‘नमस्ते माइली आमा, सन्चै हुनुहुन्छ ?’ बूढी आमैले चिनिन्छिन् क्यारे खुबै घोरिइन् ।
‘बाबु…. तिमी । ए ! सुमन पो हौ ? बल्ल चिने । कति राम्रा भएछौ । तालुको कपाल झरेछ । ठम्याउन सकिन । नमस्ते बाबु नमस्ते ।’
पाकेको चिया खान माइली आमा सधैं टुप्लुक्क आइपुग्थिन् । आज घरैबाट बोलिन् ।
आमा सरला कता गइछन् ? कतै देख्दिन ! युगल पनि छैन ! कतै काम परेर जान्छु भनेकी थिइन् कि ?’
धेरै प्रश्न सोधे तर जवाफ ‘खै ?’ भन्ने संकेतमा ओठ फर्काएर मात्र दिइन् र लुरुक्क भित्र पसिन् । वरपरका छिमेकी क्रमशः रमिते बन्ने क्रम जारी थियो ।
सरला घर आउँदै थिइन् । ढोका खुल्ला थियो । छिटो छिटो खुट्टा चलिन् । ‘के भयो मेरो घरमा ? युगल….!’ उनको शंका उपशंका बढ्दै गयो । आज सोच्नै नसक्ने परिस्थिति भित्रिएको थियो ।
भान्सा कोठामा पसे । भाँडा धेरै जसो रित्ता थिए । थोत्रो ग्याँसले गिज्याइरहेको थियो ।
‘ए..! तपाईँ आउनु भो ?’ सामान्य भाषामा बोलिन् सरला । बिहान मात्रै छुट्टिए जस्तै गरी । भित्र पसिन् । चियाको भाँडोमा पानी बसालिन् । चिनी थिएन । हतारिँदै पसलतिर लागिन् । एक पाउ चिनी उधारो दिन दुःख मान्ने साहुजीले एक किलो चिनीको थैलो हातमा थमाउँदै भने ‘पैसा पछि दिए पनि हुन्छ ।’
सुमन भान्सामा पसे । भूइँमा थ्याच्च बसेर दाउँरा धकेल्दै थिइन् सरला । पछाडिबाट बिस्तारै हात समाए । रोमाञ्चित बन्दै भने ‘बाबु खै त ?’
उनको हात रुखको जरा जस्तै चेप्टिएको थियो । हातमा लगाएका चुरा खस्नै लागेका थिए । कपाल जिङरिङ्ग परेर टुक्रिएको थियो । लगाइएका कपडाहरुले परिचय फरक किसिमले दिइरहेका थिए । खुट्टामा तुना फेरिएका चप्पलले सुमनलाई पुनः मर्माहित बनायो । लामो कपाल, गोलो अनुहार, वान्की परेको शरीर र मेकअपले अप्सरा जस्तै देखिने प्यारी र कल्कलाउँदी सरलालाई छोडेर गएका थिए सुमन । अझै खुसी, सुखी र सुन्दर बनाउने सपना बोकेर झण्डै एक दशक बेपत्ता भएका थिए उनी ।
‘के गर्छ बाबुले ? कस्तो छ ? ठूलो भयो होला ? कतिमा पढ्छ ?’ यावत प्रश्नहरुको जवाफ ‘अँ र हँ’ मा दिइन् सरलाले ।
‘मलाई हेर न ।’ कोल्टे बसेकी श्रीमतीलाई आफूतर्फ फर्काए ।
‘म नभएर दुःख पायौ है ?’ तर जवाफ आएन ।
जवान श्रीमती र सानो छोरोलाई छोडी सलुसँग कोर्ट म्यारिजको अभिनय गरेर अमेरिका छिरेका थिए सुमन । सुब्बाको जागिरले सन्तोष थिएन उनलाई । अमेरिका पुग्ने र पैसामा चुर्लुम्म डुब्ने चाहना थियो उनीमा । एक दिन सरलालाई फकाउँदै भनेका कुरा मस्तिष्कमा घुमिरहेका थिए ।
‘सरला, म अमेरिका जाने भए नि !’
‘सलुलाई डि.भी. परेको छ । उसैसँग मैले कुरा पनि गरिसकें । हुन्छ भनेकी छ ।’
‘हुँदैन । पर्दैन जान । के चाहिएको छ हामीलाई योभन्दा बढी । जागिर छँदैछ । खान पुगेकै छ । बाबुलाई पढाउन सके भैहाल्यो नि ।
‘बाबुलाई म डक्टर बनाउन चाहन्छु । अमेरिका जाने यस्तो अवसर फेरि कहाँ पाइन्छ र ?’
सलुलाई अमेरिकन डि.भी. चिठ्ठा परेको थियो । गरिब घरकी सोझी केटी सलुसँग न त अमेरिका पुग्न सक्ने पैसा नै थियो न त आँट नै । उसलाई चाहिने पैसा लगानी गर्न तयार थिए सुमन । अमेरिका जान लोभिएका उनी प्रक्रिया अघि बढाउँदै थिए ।
खुट्टामा तुना फेरिएका चप्पलले सुमनलाई पुनः मर्माहित बनायो । लामो कपाल, गोलो अनुहार, वान्की परेको शरीर र मेकअपले अप्सरा जस्तै देखिने प्यारी र कल्कलाउँदी सरलालाई छोडेर गएका थिए सुमन ।
सलुको विवाहित लोग्ने भएर मात्र सुमन अमेरिका जान पाउने थिए । सरला मान्न तयार थिइनन् । आफ्नो लोग्नेलाई अर्काको जिम्मा लगाउने साहस थिएन उनीसँग । सुमनलाई रोक्ने धेरै कोशिष गरिन उनले ।
बर्षौ भैसकेको थियो सुमनले डि.भी. भर्न थालेको । डि.भी. खुल्नु पूर्वबाट सुरुभएको अमेरिकन चर्चा–परिचर्चा नतिजापछि निराशामा टुंगिन्थ्यो । ‘अमेरिकाको डि.भी. खुल्दै छ, खुल्यो, भर्ने म्याद आज सकिदैछ ’ जस्ता कुरा सुमनले जोडतोडका साथ सुनाउँथे । चिठ्ठा खुलेपछि उनको अनुहार मलिन बन्थ्यो । ‘सुमन सर, यो पाली त हजुरलाई पर्यो होला नि ?’ भन्ने शब्दले मर्माहत बनाउँथ्यो उनलाई । व्रmेज बढ्दै थियो । घर परिवार, समाज, पत्रपत्रिकालगायत सबै क्षेत्रमा डि.भी.को खुलेर प्रशंसा गर्ने मध्ये सुमन अब्बलमा गनिन्थे । टेलिभिजनमा हेरेको अमेरिकालाई प्रत्यक्ष हेर्ने, महसुस गर्ने, अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेर सुखसँग बाँच्ने कल्पना मै बित्थे उनका कैयौं रातहरु । यस पटक यो मौकालाई गुमाउन चाहन्नथे उनी ।
सँगै सुतेको छोराको अनुहारमा हेर्थे र पैसासँग दाँज्थे । छोराको सुख र भविष्य पैसा भित्रै देख्थे । श्रीमतीको ऐस आरामको जिन्दगीलाई डलरसँग दाँज्थे । ठूलो घर, सुन्दर श्रीमती र दक्ष छोराको परिकल्पनामा बाँच्न थालेको धेरै भैसकेको थियो उनको । मध्यम वर्गीय परिवार र सम्झौताको जिन्दगी बुद्धि र भाग्य दुवै नहुनेले मात्र जिउनुपर्छ भन्ने सोच्थें । सलुसँगको यस पालीको साथलाई छुटाउन नहुने देखेर नजिकिदै थिए उनीसँग ।
‘सलु सेकेण्ड लेटर आयो ?’
‘छैन…। किन ? कसरी जाने खै ? पैसा पनि छैन । डि.भी. पर्दैमा अमेरिका जानै पर्छ र ? आ… म त जान्न दाइ । आनन्द छ यहीं । दुःख–सुख गर्यो खायो । उता गएर कति दुःख पाइने हो ? नचिनेको ठाउँ । आफ्ना कोही हुँदैनन् ।’ यस्तै खोजेका थिए उनले । मौकाको फाइदा उठाउने अवसर थियो यो । सम्झाए सलुलाई । धेरै कुराको लोभ देखाए । घर परिवार समेतलाई प्रभावित बनाई छोडे । अन्ततः सलुको परिवारलाई आफ्नो जिम्मा लगाएर सलुलाई अमेरिका पठाउन तयार बनाएका थिए ।
‘सरला, कुरा बुझन । अमेरिका जाने मेरा लागि मात्र हैन । तिम्रै लागि सोचिरहन्छु म । एकपटक ग्रीनकार्ड हात परेपछि त… ।’
‘हुँदैन । मलाई पैसा हैन माया चाहिन्छ । हजुरको साथ चाहिन्छ । हजुर बिना म अपुरो हुन्छु । जे छ म त्यसैमा सन्तोष छु । छोडिदिनुस् यी सबै कुरा ।’ झनक्क रिसाउँदै धेरै पटक भनेकी थिइन् सरलाले । मनभित्र अमेरिका दौडाएका सुमनलाई जसरी पनि श्रीमती फकाउनु थियो । ‘डिभोर्स’ गर्नु थियो । पुनः सलुसँगको वैवाहिक सम्बन्ध देखाएर मात्र अमेरिका छिर्नु थियो । यस्तो अमूल्य मौका फेरि आउनेवाला थिएन ।
गाउँका धनी भनाउँदाको ठाँट एवं रवाफ धेरै देखेकी थिइन् सरलाले पनि । शरीरभरि ढकमक्क गहना र कपडाले छोपिएर लोग्नेको हात समातेर मस्कदैं गरेका धेरै युवतीप्रति उनको मन लोभिँदै जान थालेको थियो । पैसाको धाक र घुर्की लगाउने छिमेकीको अगाडि दाँजिने सोंच सुस्तरी पलाउन थालेको थियो । उनको सपना रातो चुरापोते, रङ्गी–विरङ्गी पहिरन र महंगा गहनामा सजिन थालेको थियो । एकातर्फ सुमनको कल्पना र अर्कोतिर सरलाको अतृप्त सम्पतिवाल बन्ने रहर क्रमशः मिल्दै जान थालेका थिए ।
झनक्क रिसाउँदै धेरै पटक भनेकी थिइन् सरलाले । मनभित्र अमेरिका दौडाएका सुमनलाई जसरी पनि श्रीमती फकाउनु थियो । ‘डिभोर्स’ गर्नु थियो । पुनः सलुसँगको वैवाहिक सम्बन्ध देखाएर मात्र अमेरिका छिर्नु थियो ।
अन्ततः सरलाले पठाइन् सुमनलाई । सुमनको जिद्दी सँगसँगै भोलिको रङ्गिन सपना छातीमा संगालेर अदालतमा छोडपत्र गरिन् सरलाले । आफ्नो सिन्दुर बेचिन् , पैसालाई धरौटीमा राखेर । अमेरिकी सपनाले पूर्व र पश्चिम बनाउँदै थियो उनीहरुलाई । छोराको एक्लो जिम्मेवारी काँधमा बोक्ने पालो उनको थियो । घर सम्पत्ति सबै सरलाको नाममा सारियो । धेरै थोरै जायजेथाको मालिक भइन् उनी । ‘कोर्ट म्यारिज’ भयो सुमन र सलुको । मनको अन्तर कुन्तरको डरलाई अठ्याएर अदालतमा सलु र सुमनको कानुनी विवाहलाई स्वीकारिन् उनले । कागजी विवाह मात्र सम्झेर तीनै जना ढुक्क थिए ।
जति जति अमेरिका जाने दिन नजिकिँदै थियो उतिउति डराउँदै थिइन् सरला । सुमनको कौतुहलता बढ्दै गएको थियो । ‘ग्रीनकार्ड’ पाए लगत्तै लिन आउने बाचा गरी सलुसँग अमेरिका उडेका थिए सुमन ।
‘यी खाजा लिनुस्’ सरलाको ठाडो बोलीले झस्किए उनी । अतीत सम्झिरहेका थिए । चाउचाउको कचौरा समातेर सरला अगाडि उभिएकी थिइन् ।
निरुत्तर भइन् सरला । सधैं लाडिएर उत्तर दिने सरला कम बोलिरहेकी थिइन् । आँखा र अनुहारबाटै प्यार देखाउन सक्ने उनको मुखाकृतिले अरु केही भनिरहेको थियो । पहिले प्रश्नै नसोधी धेरै उत्तर पाउने सुमन अहिले श्रीमतीको स्वभावमा आएको परिवर्तनप्रति सोचमग्न थिए ।
श्रीमतीको नजिकै सरे । सधैँ चलायमान भैरहने र नजिक पर्नासाथ जिस्कने सरलाले आज कुनै शारीरिक प्रतिक्रिया देखाइनन् । सुमनको नजरमा कामुक देखिने सरलामा रङ्गहिनता थियो । नैराश्यता थियो । ‘सन्चो बिसन्चो पनि सोधिनौ त ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ डिच्च दाँत देखाएर मात्र दिइन् उनले । ओठ हाँस्नका लागि खुल्न मानिरहेका थिएनन् । सुमन गएदेखि उनका सपनाहरु खण्डहर बनेका थिए । पुग नपुग एक बर्षमै सुमनसँग सम्पर्क टुटेको थियो । अर्काको जिम्मा लगाएर पठाएको लोग्नेको आश गर्नु भनेको आफैलाई धोका दिनु जस्तै थियो । ‘तँलाई तेरो लोग्ने चाहिएकै थिएन ।’ भन्ने छिमेकी र आफन्तका प्रश्नहरु निरुत्तर बनेका थिए उनका अगाडि । समाजले एक्ली आइमाइलाई हेर्ने नजर र पैसा बिनाको घरपरिवार उनको लागि चानेचुने कुरा थिएनन् । श्रीमान्को अभावमा आफ्नो जवानीलाई धेरै पटक थिचेकी थिइन् उनले । घर खर्च, सुमनको पढाइ र अन्य अप्ठेरा काम सित्तैमा हुनेवाला थिएनन् । ऋण लिएर तिर्ने उपाय पनि थिएन । सानो काम गर्दा पनि फाइदा खोज्नेहरुले कामको बदलामा जवानीको आस गर्न थाले । घर खर्च चलाउनको लागि के गरिनन् सरलाले । सुमनको अभाव खट्किरहेको थियो । बिछोडको पीडा सहन हम्मे हम्मे परिरहेको थियो उनलाई । मर्नुभन्दा बहुलाउनु वेस भनेझै छुट्टिनुको पीडा बिर्सन चुरोटको बट्टाहरुसँग रात बिताउन थालेकी थिइन् उनले । ‘इण्डियन सिरियल’ हुँदै अन्तत भट्टीसम्म उनको जिन्दगी जोडिँदैे थियो भने छोरा र आफन्तसँगको सम्बन्ध पातलिदै । खानाको अभावमा भोकै सुतेका रातहरु उनको मनभरि खेलिरहेका थिए ।
‘बाबु आएन ?’ झस्किन् सरला । निधारको चिटचिट पसिना पुछ्दै सम्हालिइन् उनी । छोराको अनुपस्थितिमा आत्तिएका थिए सुमन । झन्डै एक दशक पछिको युगलसँगको भेटका लागि वेचैन थिए उनी । छोराको रुपरङ्ग, जिउडाल हेर्ने हतार भएको थियो उनलाई ।
सरलासँग निस्किए सुमन छोराको खोजीमा । गाउँ घर डुले । गाउँलेहरु अचम्म मानेर यो जोडीलाई हेरिरहेका थिए । युगलको पत्तो थिएन । धेरै ठाउँ सोधे पनि । कसैले पनि जवाफ दिएनन् । सरला चुपचाप सुमनको पछाडि हिडिरहेकी थिइन् । युगल प्रायः खहरेको किनारमा जाने र बस्ने गरेको सरलालाई थाहा थियो तर भन्न चाहिनन् उनी । निकै बेरपछि दुवै जना खोला किनारतर्फ लागे ।
ढुंगामाथि बसेर एकोहोरो खोला हेरिरहेको थियो युगल । चुरोटका बट्टा र सुर्तीका पोकाहरु यत्रतत्र छरिएका थिए । ठिङरिङ्ग परेको केशराशी आकाशतर्फ सोझिएको थियो । शरीरका कपडाहरुले अङ्ग प्रत्यङ्ग चिहाइरहेका थिए । पैतालामा फाटेका चप्पलहरुले गिज्याइरहेका थिए । सूर्ती र चुरोटबाट खिइएका र कलेटी परेका ओठहरु चरचरी फुटेका थिए । बालापन देखिनु पर्ने हत्केलाहरुमा शायद भाग्य रेखाहरु नै हराइसकेका थिए । नजिकैबाट एक कालो आकृति खुट्टै समात्ला जस्तै गरी बगेर गयो । तर्सियो ऊ । खुट्टामाथि तान्यो । ओठ कपाउँदै बोल्यो ‘अभागी मोरो, दुःख लुकाएछ ।’
ऊ विक्षिप्त थियो । बाबुआमा भएर पनि टुहुरो जस्तो थियो । हाँस्दा रुँदा दुवै अवस्थामा साथी बनेको थियो खहरे । बेस्सरी कपाल समात्यो । मुख बिगार्यो । मन अमिलो पार्यो । पकेट छाम्यो र चुरोट निकाल्यो । सलाई नभेटेपछि ‘हरि कंगाल तँ’ भन्दै गाली गर्यो आफंैलाई । चुरोट कच्याककुचुक पारी पानीमा फाल्यो । सूर्तीको पोको निकाल्यो । ओठमा च्याप्यो थोरै झिकेर ।
दुवै खुट्टा पानीमा क्रमशः चोबिए । भासिएको अतित र भाग्यको भग्नावशेषलाई बेस्सरी सम्झने कोशिष गर्यो । ‘साला जिन्दगी’ भुन्भुनायो भित्र भित्रै । पछाडि फर्कियो । आमालाई देख्यो साथमा लोग्ने मानिस पनि । चिन्न खोज्यो तर ठम्याएन । उसलाई ठम्याउनु पनि थिएन । नदीका किनारमा यस्ता अपरिचित धेरै मानिसहरुलाई आमासँगै देखेको थियो उसले धेरै पटक । केही छिन अनुहारमा हेर्न मन लाग्यो तर फनक्क फर्कियो आफ्नै दुनियामा ।
‘बाबु युगल, मेरो छोरो ।’ सुमनले हात समातेर उठाए । अकंमाल गरे । आफूजत्रै भएकोमा हर्ष माने ।
‘युगल बाबालाई चिनेनौं ?’ निरुतर भयो युगल ।
‘बाबु दुःख पाइस् ।’ यत्ति बोले उनी । श्रीमतीतिर फर्के । पहाड जस्तै अटल बनेर उभिएकी थिइन् सरला । कुनै प्रतिक्रिया थिएन उनको । सुमनलाई अब सोच्नु र सम्झनु पर्ने केही थिएन । सबै छर्लङ्गै थियो ।
युगललाई कसैले माया नगरेको धेरै भएको थियो । आमाले आफूलाई माया गरेको सम्झन पनि बर्षौअघि फर्कनु पथ्र्याे उसलाई । समाजबाट अपहेलित, साथीबाट तिरस्कृत र स्कुलबाट निष्कासित युगललाई आफैमाथि विश्वास थिएन ।
सुमनको मनमा अनेक तर्कना खेले । अतीत चलिचित्रको पर्दा झैं सरिरहेको थियो । अमेरिका पुग्ने सपना बाहेक अन्य सपनाहरु सपनामै परिणत भएका थिए । सलुसँग अमेरिकासम्म पुग्ने सर्तमा विवाहको नाटक रचिएको थियो । दोस्रो विवाह गर्ने रहर न सुमनलाई थियो न त बूढो लोग्ने स्याहार्ने इच्छा सलुलाई । नयाँ ठाउँ थियो । नयाँ परिवेश । कहाँ जाने र के गर्ने दुबै अनभिज्ञ । एक्ला एक्लै हिड्नु झनै कठिन थियो उनीहरुलाई ।
अप्सराहरुका अगाडि ऋषि तपस्वीहरुको तपस्या भङ्ग भएझैं सुडौल शरीर, यौवनले भर्भराउँदी सलुले सुमनको तपस्या भङ्ग गर्दै थिइन् । सँगैको बस उठले श्रीमान् श्रीमती जस्तै लाग्थ्यो अरुहरुलाई पनि । सुमनलाई श्रीमान्का रुपमा स्वीकार्न कुनै कठिन भएन सलुलाई । सुमन सलुलाई साँच्चैकी श्रीमती स्वीकार्न चाहदैनथे । शरीर अमेरिका भएपनि मन मस्तिष्क नेपालमै थियो । युगल र सरलासँग रमाउन चाहन्थे । सपनाको भरिया भएर अमेरिका छिरेका थिए उनी ।
अप्ठ्यारा दिनहरु सकिएका थिएनन् । कागजात एवं पासपोर्ट विना काम गर्नु पटक्कै सजिलो थिएन । आफ्नो ज्यान धरापमा राखेर काम सुरु गरे ।
‘फुले जस्तो फल्ने र सोचे जस्तो हुने’ भए को नै दुःखी हुन्थ्यो र ? पेटको लागि संघर्ष गर्नु पर्यो दुवैलाई । किराना पसल, होटल, कुल्ली हुँदै झिना मसिना काममा झण्डै दुइ बर्ष बिताउनु प¥यो उनीहरुले । सीप र अनुभवको आधारमा दुई चार पैसा जम्मा हुन थालेपछि सलु अमेरिकी संस्कृतिमा जम्न थालिसकेकी थिइन् ।
सुमनलाई श्रीमान् स्वीकारेकी सलुले उनको कमाइमा दावा गर्नु नाजायज थिएन । अमेरिकन जस्तो गर्छन् त्यस्तै गर्न सकेमा नै आफ्नो इज्जत रहने सोच्थिन् उनी । युगलको भविष्यका लागि एक सन्तान मात्र जन्माउने निर्णय गरेका सुमनले सरलाको छोरी जन्माउने जिद्दीलाई लत्याएर परिवार नियोजन गरेका थिए । यो कुरा धेरै पछि थाहा पाएकी थिइन् सलुले । मोज मस्तीमा रम्नु, फरक फरक ‘ब्वाय फ्रेण्ड’ बनाउनु पश्चिमी संस्कृतिको परिचय नै हो क्यारे । यही परिचयको हिस्सेदार भइसकेकी सलुले चारैतिर सम्बन्ध बढाउँदै थिइन् ।
सलुले सुमनलाई घरको नोकर सम्झन थालेकी थिइन् । आफ्नै कारण अमेरिका छिर्न पाएको कुरा दोहोर्याउँथिन् । छोरा युगल र श्रीमती सरलाका लागि अमेरिका पुगेका सुमन फगत् सलुका दास बन्दै गएका थिए ।
अमेरिका छिरेको पनि पाँचौ बर्ष हुँदै थियो । दुई बर्षमै पैसा सहित घर फर्कने कबुल गरेका थिए सुमनले । यतिका दिनसम्म न त पैसा पठाए न त खबर नै । छोरा युगल र सरलाको सम्झनाले सताउन थाल्यो । आफूले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकोमा पछुतो हुँदै थियो । नेपाल फर्किने चाहना दिन दिनै बढ्न थाल्यो । पैसा बोकेर फर्कने सम्भावनालाई सलुले तुहाइदिएकी थिइन् । सुमनको कमाइमा रम्न पल्केकी सलुले सुमनलाई नेपाल फर्काउन चाहन्नथिन् । पासपोर्ट र अन्य कागजात पहिले नै लुकाईदिएकी थिइन् ।
सहनुको पनि सीमा हुन्छ । स्वाभिमानले बाँच्ने अभिलासा लिएका सुमनलाई सलुको बढ्दो अभिमानले अपमान बनाउँदै थियो । सलुसँगै बसेमा घर न घाटको हुने कुरा निश्चित प्रायः थियो । उनीबाट अलग्गिनु बाहेक कुनै विकल्पहरु बाँकी थिएन उनीसँग । अन्तमा सलुलाई त्याग्नु नै श्रेयश्कर ठाने उनले ।
अप्ठ्यारा दिनहरु सकिएका थिएनन् । कागजात एवं पासपोर्ट विना काम गर्नु पटक्कै सजिलो थिएन । आफ्नो ज्यान धरापमा राखेर काम सुरु गरे । घरमा खबर आदान प्रदान नभएको पनि बषौंं बितेको थियो । जसरी पनि पैसा कमाउने उद्देश्य बोकेर अमेरिका छिरेका सुमनले छोटो समयमा धेरै पैसा कमाए ।
सलुसँग छुट्टिएको केही बर्षमै सुमनले लाखौं कमाए । कागजात बिना पनि उनी कहिल्यै पक्राउ खाएनन् । सलुले साथ नदिए पनि भाग्यले साथ दियो । पैसा कमाउने धोका पुरा भयो । पैसा पठाउने बन्दोबस्त मिलाई नेपाली दुतवास मार्फत अन्ततः फिर्ता भए उनी ।
अनगिन्ती गहना र कपडाले भरिएको झोला सरलाको अगाडि थियो । बजारबाट फर्कदा बाटैमा झोला खोतल्ने र एउटा रुमाल ल्याउँदा पनि हात्ती नै ल्याइदिए झै खुसी हुने सरलालाई ती महङ्गा गहनाले लोभ्याउन सकेका थिएनन् । कुनै उत्सुकता थिएन उनीमा । बाबुसँगै बस्न, सुत्न, खान र डुल्न मन पराउने युगल आज बाबुको नजिकसम्म परेको थिएन । युगललाई डाक्टर बनाउने धोको पुरा हुने संकेत नै थिएन । लागु पदार्थको दुव्र्यसनबाट छुटाउन सुधार गृहका लागि डाक्टरसँग सल्लाह गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्थ्यो सुमनलाई । गाउँ समाजमा इज्जतले बसेका उनीसँग गाउँलेहरु औपचारिकता मात्र निभाइरहेका थिए । कार्यालयबाट घर फर्कदा सधँैजसो एक आधा घण्टा भलाकुसारी गर्न घरमै आउँथे छिमेकीहरु । यतिका बर्षपछि घर फर्कदा समेत उनीहरु निकै हतारो भए जस्तो गरिरहेका थिए । सुख दुखःका कुरा गर्न समेत खोजिरहेका थिएनन् । पैसा भएपछि सबै नजिक हुन्छन् भन्ने लागेको थियो सुमनलाई । नीतिशास्त्रमा लेखिएको यो श्लोकबाट निकै प्रभावित थिए उनी ।
टका धर्मः टका कर्मः टकैव परमं् सुखम् ।
अर्थात् पैसाले नै धर्म हुन्छ । पैसाले नै कर्म हुन्छ । पैसाले नै श्रेष्ठ सुख पाइन्छ । जसको घरमा पैसा छैन , उसको घर सबै कुराले टकटकिन्छ वा रितिन्छ भन्ने नीतिशास्त्रको भाव आज उनलाई झुट्टा लाग्दै थियो ।
उनीसँग प्रशस्त धन थियो तर सम्मान थिएन । आफूसँग भएको पैसाले श्रीमतीको न सुन्दर जीउडाल फिर्ता आउँथ्यो न आचरण । छोरामा न कुनै उत्साह आउँथ्यो न अनुशासन । एक कमाएर हजारौं गुमाएको महसुस हुँदै थियो उनलाई । आफ्नै घर आफ्नो लागिरहेको थिएन । आफ्नो छोरो र श्रीमती आफ्नै जस्ता लागिरहेका थिएनन् । छरछिमेक र आफन्तहरु नजिक थिएनन् । उनीसँग भौतिक सुख थियो शान्ति थिएन । सुन्दर ओछ्यान थियो निद्रा थिएन । मिठो भोजन थियो भोक थिएन । सबै सबै थियो तर केही थिएन । विजय भएर पनि पराजय खेपिरहेका थिए उनी ।